Al-Shabaab oo goob fagaare ah ku toogatay Anfac Xuseen | KEYDMEDIA ONLINE
Al-Shabaab oo goob fagaare ah ku toogatay Anfac Xuseen
Kooxda Al-Shabaab, ayaa laba jibbaartay toogashada dadka maxaabiista ah ee ay gacanta ku hayaan, kadib toogasho wadareedkii xubnahooda ee ka dhacday degaannada Puntaland.
JALALAQSI, Soomaaliya - Fagaaro ku yaalla degaanka Shaw oo hoos yimaada degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa lagu toogtay haweeney ay ku eedeysay inay ka tirsaneyd Ciidamada maamulka Hir-shabeelle.
Dadweyne fara badan, ayaa la isugu keenay goobta toogashada ka dhaceysay, kuwaas oo ay Al-Shabaab ku qasabtay inay daawadaan sida ay u dilayaan haweyneydaasi.
Gabadha la dilay, ayaa lagu magacaabi jiray Anfac Xuseen Muxumed , taasoo Kooxda Al-Shabaab sheegtay inay kamid ahayd Ciidamada Millateriga ee fadhigoodu yahay Xerada Lama-galaay ee Beledweyne.
Degaannada ay maamusho Al-Shabaab waxay horay ugu toogatay rag & dumar ay ku eedeysay in ay gacan saar la leeyihiin Dowladda iyo dalal shisheeye, waxaana la xusi karaa in bishii July ay ku dhawaad 50 qof degaanno kala duwan toogasho wadareed ugu filisay.
Toogashada ayay Al-Shabaab fulisay kadib markii Puntland ay dishay 21 qof oo ay sheegtay inay kamid ahaayeen Al-Shabaab, una qaabilsanaayeen qaraxyadii iyo weeraradii ka dhacayay 11-kii sano ee lasoo dhaafay magaalada Gaalkacyo.